Virus Concerns Drive Up Chinese Demand for Mexican Beef | Myanmar Business Today
Home Business Regional Virus Concerns Drive Up Chinese Demand for Mexican Beef
Virus Concerns Drive Up Chinese Demand for Mexican Beef
China’s appetite for Mexican steaks and other cuts of beef is expected to increase more than 40 percent this year, in part due to disruptions caused by the coronavirus outbreak, according to Mexico’s top cattle association.
Chinese buyers represent only about4percent of Mexico’s foreign beef sales but the Asian market has beenasteady source of growth, especially since most shipments in the past have gone to just Hong Kong. More than 80 percent of total Mexican beef exports go to U.S. customers.
Rogelio Perez, the top trade official for Mexican cattle growers association AMEG, which forecasts future industry sales, estimated the sales resulting from the impact of the virus could amount toathird of the overall 40 percent sales growth.
Perez, in an interview January 5, said China’s domestic beef producers have been especially hard hit by the disruption caused by the flu-like coronavirus, which has killed more than 500 people.
China is by far the top beef importer, with imports in 2020 projected to bearecord 2.9 million tons, nearly double 2018’s total, according to U.S. Department of Agriculture data.
AMEG estimates the Asian giant bought some 250,000 tons of Mexican beef last year, worth around $40 million. Total Mexican beef exports in 2020 are projected at 390,000 tons, up 25.8 percent from 2018, according to USDA data.
Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ယခုနှစ်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံထွက် အသားများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝယ်လိုအားသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝယ်ယူတင်သွင်းမှာမှာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ အသားတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ သို့သော် အာရှဈေးကွက်မှာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ အသားတင်ပို့မှု တိုးတက်လာစေသည့် အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအသားတင်ပို့မှု စုစုပေါင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။
Coronavirus ကူးစက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာစေသည်။
အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် စားနပ်ရိက္ခာအဓိက ထုတ်လုပ်နေသော ပြည်နယ်ဖြစ်သော Hubei ပြည်နယ်ကို ပိတ်ချထားသည်။ ခရီးသွားလာမှု တင်းကြပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကို လျော့ကျစေခဲ့သည်။
မက္ကဆီကို ကျွဲနွားမွေးမြူရေးအသင်း AMEG ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော Rogelio Perez ကတော့ virusကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စုစုပေါင်း ရောင်းအားတိုးတက်မှုဖြစ်သည့် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံအထိ မြင့်တက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ မြင့်တက်လာသော ဝယ်လိုအားသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အသားတင်ပို့ခွင့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် SuKarne နှင့် Grupo Gusi တို့ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် အခြားသော မက္ကဆီကို ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ၄၂ ခုမှာလည်း အတည်ပြုချက်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
အာဖရိက ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ဝက်သား ထွက်ရှိမှု လျော့ကျပြီး ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်စေခဲ့ကာ အမဲသားကို ပိုမို စားသုံးလာကြမည်ဖြစ်သည်။
SOURCEDavid Alire Garcia(Reuters)
Previous articleFoxconn Sees Full China Production Resuming in Late February
Next articleFacebook Closes Fake Accounts Allegedly Linked to Mytel, Viettel